China LIUGONG 5 taonina 856H kodiarana loader front end loader ho an'ny varotra factory ho an'ny milina fanodinana sy mpanamboatra | China Construction
LIUGONG 5 taonina 856H kodiarana loader front end loader ho an'ny varotra machinemoving machine
Amin'ny tontolo sarotra fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fitrandrahana dia tsy misy toerana azo foraina. Tokony ho fantatrao fa ny kodiaranao dia mahazaka mora foana ny asa mafy isan'andro amin'ny hafainganam-pandeha, toekarena ary faharetana tsy misy farany. Ny fahatokisanao ny orinasa amin'ny farany miankina amin'ny fahombiazan'ny milina ary miaraka amin'ny 856H vaovao dia azonao antoka fa eo am-pelatanana azo antoka ny lazanao.
Ny jironay dia noforonina ho antsika, matanjaka kokoa ny jiro ary lava kokoa ny fiainany miasa.
Taxi-be habakabaka, karazana mandeha ho azy, fifaliana tokana amin'ny mekanika, mora ampiasaina.
Ny fitehirizana hafanana elektrika dia mety ho maina tanteraka, mangatsiaka be rehefa preheating mialoha.
Ireo mpamono afo eto amintsika dia manana kalitao fanondranana avo lenta.
Ny fakantsary fakan-tsary any aoriana dia raitra ary avo lenta ao anaty taksi.
Ny Air conditioner dia ny volavolanay tany am-boalohany, ny patantinay manokana. Ny effets fanafanana anf mangatsiaka dia tsara be.
Ny fitaovan'ny fiarakaretsakay dia nalaina avy amin'ireo zavamaniry vy tsara indrindra, nahatratra ny fenitra nasionaly. Tena mafy izy io ary afaka miaro ny fiarovana ny mpandraharaha. Ny veranay dia vera tsy misy bala sy matevina.
Maotera mahery ny moterantsika. Ary izahay dia miasa miaraka amin'ireo ozinina maotera tsara indrindra eraky ny firenena. Ny motera dia misy fitaovana fampidinana hafanana, izay mora ny manomboka amin'ny ririnina
Ny fitoeran-tsolika. Ny ao anaty fitoeran-tsolika dia tsaboina amin'ny pickling sy phosphating, izay tsy hiteraka fanakanana ny fahalotoana ary hiantoka ny fandefasana tsara ny faritra tsirairay amin'ny rafitra hydraulic.
Ny kodiarana. Mandray kodiarana Steel Brand izahay, izay manana 18 PR Nylon misy sisiny mahazatra, misy kodiarana fantsona ao anatiny. Izy io dia mateza kokoa.
Ny lanjan'ny asa 17000-19300kg
Tavoahangy mahazatra 3.0m³
Hery lehibe 162kw
Herin'ny harato 149kw
Misy laharana 5000kg
Total cycle cycle 10s
Mihodina tanteraka 10800kg
Herin'ny fanapahana siny 172kn
Fanesorana ny fako; famoahana ny haavony feno 3100mm
Fandraisana anjara: famoahana ny haavony feno 1126mm
MODELY Cummins 6LT9.3
famokarana entona Dingana EPA Tier2 / EU
Rafitra mangatsiaka Hiampanga ny fihenan'ny rivotra
Halavany miaraka amina siny 8357mm
Ny sakany amin'ny kodiarana 2750mm
Haavon'ny cab 3450mm
Tariby mihodina; ivelan'ny kodiarana 6205mm
Fahaizana bucket 2.6-5.6m³
Tanjona ankapobeny 3.0m³
Fitaovana maivana 4.2,5.2,5.6m³
Vato mavesatra 2.7m³
Teo aloha: LIUGONG 2Ton CLG820C Wheel Loader
Manaraka: LIUGONG 7 taonina Hot varotra entana mpamaky kodiarana marika vaovao china hamidy milina fananganana tany 877H
LIUGONG 7 taonina Hot varotra china marika vaovao kodiarana lo ...
LIUGONG 3 taonina New Hot Sale kodiarana loader ho an'ny ...
Jingong 3 taonina JGM737-III modely vaovao Wheel loader
Liugong 8ton China mpanamboatra mora vidy kely ...
XCMG 3ton Ofisialy XC740K Skid Steer Loader